Ogaden News Agency (ONA) – Waftigii uu hogaaminayay G/ku-xigeenka oo qadarin kala kulmay Shacabka Somaliyeed ee Wadanka UK.
Waftigii uu hogaaminayay G/ku-xigeenka oo qadarin kala kulmay Shacabka Somaliyeed ee Wadanka UK.
Posted by ONA Admin	/ June 27, 2011
Magaalada London waxaa ka dhacay shir aad u balaadhan oy kasoo qaybgaleen dad farabadan oo ah Shacabka Somali weyn ee ku dhaqan magalada London. Dadweynaha isugu yimid ayaa waxa ay ka koobnaayeen Ururarda Bulshada Somaliweyn iyo aqoonyahanka Somaliyeed ee ku dhaqan wadanka UK. Shirkan ayay jeedadiisu aheyd in gudoomiye Ku xigeenka Ururka ONLF Dr Maxamed Ismaaciil uu uga warbixiyo xaalada halganka somalida Ogadeniya iyo meesha uu marayo.
Gudoomiye Ku xigeenka ayaa si waafi ah uga waramay guulaha ay Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadaneiya kasoo hooyeen dagaalka ay ugu jiraan xoriyad raadinta dhulka iyo Shacabka Somalida Ogadeniya. Gudoomiye ku-xigeenka ayaa ku warbixiyay in halganka ONLF uu marayo marxalad aad u sareysa, inkastoo uu cadowga guumeysiga ah isticmaalay xoogiisa oo idil, mid ciidan iyo mid siyaasi ahba siduu u hakin lahaa halganka shacabka Somalida Ogadeniya. Gudoomiye Ku xigeenka ayaa ugu baaqay shacabka Somalida guud ahaantiiba inay xoojiyaan garab istaaga iyo u hiilinta halganka shacbiga Ogadeniya.
Waxa kale oo shirkan ka hadlay Hogaanka Arimaha Bulshada mudane Maxamed Yaasiin Diirane oo aad ugu dheeraday xidhiidhka ka dhexeeya shacabka Somaliyeed iyo halganka taariikhiga ah ee ka socda dhulka Ogadeniya.
Shirkan oo ay kasoo qayb galeen jaaliyadaha Somaliweyn ee ku dhaqan UK ayaa ahaa mid xiiso gaar ah leh. Siyaasiga Somaliyeed ee caanka ah Dr Sakariye ayaa ka war bixiyay baahida ay Somaliweyn u qabto sidii ay u mideyn lahaayeen xooggooda loona garab istaagi lahaa halganka shacbiga Somalida Ogadeniya. Wuu sheegay Dr Saakriya in hadda ka hor ay dowlada Ethiopoia uga baryootami jirtay wadamada Ree Galbeedka ah waxa aan nahay dowlad Masiixi ah oo ku dhex nool mandaqad islaam, sidaasna ay taagero ku heli jirtay. Maanta waxa ku dhex nool dhulalka Ree Galbeedka Jaaliyadihii Somaliyeed iyo Somalida Ogadeniya. Waxa cod buuxa ay ku leeyihiin siyaasada wadmada ree galbeedka. Waxa aan ku qasbaynaa Ree galbeedka inay badaladaan siyaasada Geeska Afrika. Wayna ku qasbanyihiin waayo cod ayaan ku leenahay. Sakariye ayaa ugu hanbalyeyay geesinimada ay somalida Ogadeniya ay ku waddeen halganka iyo Guulaha ay ka gaareen.
Waxa kaloo ka hadlay shirka Sheekh Bashiir oo ah imaam caan ka ah siyaasada Geeska Afrika khaasatan wadanka UK. Waxa uu sheegay in uu Hiil iyo Hooba la garab taagan yahay Halganka Gobanima-doonka ah ee ONLF ay hogaaminayso. Waxa uuna halkaas ku sheegay in uu xubin buuxa ka noqonayo halganka lagu baadi goobayo xoriyada Somalida Ogadeniya. Sheekh Bashiir ayaa sheegay magaalada uu ku dhashay in dagaalkii Ogaden ee 77kii qoyskiisa oo saddex ka kooban ay laba wiil, isla markaana qoyski laba wiil lahaa u midi qoriga qaaday. Waxa sheekh Bashiir uu aad u dhaleecayay culumada sheeganaysa islaamka ee cadowga u gacan galay ee hoosaasniya halganka shacabka ee xaqqa ah.
Waxa kale oo halkaas ka hadlay dhalinyaro badan oo Somaliyeed oo ka tirsan ururo dhalinyaro waxaana hadaladoodi ka mid ahaa, In Madaxda Ururka ONLF ay yihiin madaxda Somaliyeed. Gudoomiye ku xigeenka ONLF waxa uu yahay Gudoomiye Ku xigeenka Jabhada Somaliyeed. Hogaanka Bulshada waxa uu yahay Hogaanka Arrimaha Bulshada ee Somaliyeed, Gudomiyaha ONLF waa Gudomiyaha Jabhada Somaliyeed meel kasta oo ay ku nool yihiin. Maanta waxa hoggaaminya Somali jabhada ONLF.
Gabdhaha Jamuhriyada Somaliyeed ee ka hadlay shirkaas ayaa iyana ka jeediyay shirka hadalo aad u mug weynaa oo aan la illaawi karin. Waxaana hadaladoodi ka mid ahaa in dhamaan Gabdhaha Somaliyeed meel kasta oo ay ku nool yihiin ay u kacaan sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen halganka xaqqa ah ee waajibka ku ah gabadh kasta oo Somaliyeed. Waa inaan dhaqaale lagarab istaagna waa in aan dahabkeena furnaa. Maanta waxa kaliya ee la taageri karro waa Jabhada ONLF oo ah jabhada u dagaalamysa gobanimada somaliyeed iyo mida Ogadeniya.
Shirkan oo dadka ka hadlay aad u badnaa oo muddo 7ba saacadood ah socday ayaa waxa kamid ahaa dadkii ka hadlay goobta shirka Qoraaga weyn ee Somaliyeed Mudane Xildhibaan oo dadkii ka ilmaysiiyeey hadaladiisi waxa uuna ugu baaqay shacabka somaliyeed in ay xoojiyaan halganka Ogadeniya.
Gudoomiye Ku xigeenka Jabhada wadaniga xoreynta Ogadeniya Dr Maxamed Ismaaciil iyo wafti heer sarre ah oo kamid ah madaxda Ururka ONLF ayaa ku sugnaa wadamada Europe muddo laba bilood ah iyaga oo wareeg ku soo maray Wadamo badan oo ka tirsan qaarada Europe waxa ayna ku soo gabagabyen socdaalkoodi Europe Magalada London. Waxa waftigan ay ula kulmeen Dowladaha Europe mudadii ay ku sugnayeen qaarada Europe.
Shirkan oo maqal iyo muqaal ah dhowaan ayaan idiin soo gudbin doona ama waxa aad ka daawan doontaan barnaamijka ilays www.ilaystv.com.